HTC One (M7) dia mahazo Android 5.0 Lollipop | Androidsis
Nampanantena ilay mpanamboatra Taiwaney fa hanavao ny sainam-pireneny ho an'ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google. Tamin'ny fotoana dia tonga tao amin'ny HTC One (M8) ary, na dia naharitra elaela aza, ny Eoropeanina HTC One (M7) dia nahazo Android 5.0 L ihany tamin'ny farany.
Ary ny fampandrenesana voalohany dia efa tonga hanavao ny terminal kintana teo aloha avy amin'ny HTC mankany Android 5.0. Ka raha manana a HTC One (M7) dia hanana ny anjaranao amin'ny Lollipop.
HTC One M7 dia manomboka mahazo ny kinova farany an'ny rafitra fiasan'i Google
Fanavaozana ny HTC One (M7) mankany Android 5.0L Milanja 805 MB ny lanjany, noho izany dia ampirisihinay hampiasa tamba-jotra Wi-Fi hisintona azy satria mety handany ny taham-data ianao.
Na ho ela na ho haingana dia ho tonga tampoka ny fanavaozana fa raha te handray Android 5.0 L amin'ny HTC One M7 ianao dia afaka mankany Fikirana> Momba> Fanavaozana rindrambaiko> Zahao izao.
Na dia amin'ny fitsipika aza dia tsy tokony hanana olana amin'ny Androidsis ianao, ary fahazoan-dalana mankany izany manaova backup amin'ireo rakitrao rehetra alohan'ny hanaovana ny fanavaozana raha toa ka voafafa ny fampahalalana rehetra amin'ny telefaonao.
Aza adino fa ity fanavaozana ity dia tsy misy afa-tsy ho an'ireo modely navotsotra, koa raha manana ianao HTC One M7 dia niantsona tamin'ny mpandraharaha finday, tsy maintsy miandry ny fanombohana ofisialy ianao.
Tsy afaka miarahaba ny mpanamboatra Taiwaney afa-tsy aho. Tamin'ny voalohany rehefa nampanantena izy fa hanavao ny roa HTC One M7 toy ny HTC One M8 amin'ny kinova farany an'ny rafitra miasa Mountain View dia tsy dia nino ny tenin'izy ireo aho.
Fa nony farany dia nahatanteraka izay nampanantenainy izy ireo ary nandefa tao anatin'ny fe-potoana, na saika, ireo fanavaozana ho an'ny terminal. Izao dia tsy afaka miandry ny andiany manaraka amin'ny MWC fotsiny isika, hahitantsika izay hatairan'ny mpanamboatra antsika aminy HTC One M9. Na dia efa tafaporitsaka aza ny ankamaroan'ny fampahalalana ...
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » HTC » HTC One (M7) dia mahazo Android 5.0 Lollipop
Alex Bear dia hoy izy:
rahoviana no hanamarihana 4?
Valiny tamin'i Alex Bear